तपाईं एक स्थिर आईपी-ठेगाना हुन सक्छ जब छैन, यो एक वेबसाइट सिर्जना गर्न असम्भव छ। डोमेन नाम इन्टरनेट ठाउँ मा खास लिङ्क गर्नुपर्छ। इन्टरनेटको महानताका र विविधताको मूल आधार थियो सादगी मा: सबै र सधैं सही, स्थिर र स्थिर - सबै को पहिलो यो सबै स्रोतहरू, नोड्स, सर्भर, routers को ठेगाना सम्बन्धित ...
गतिशील DNS-DDNS को विचार एक अपेक्षाकृत नयाँ र तेजी प्राप्त लोकप्रियता छ। собственного статического и наличии постоянно меняющегося IP, могут получить желаемое практически при любых вариантах подключения к интернету через любого провайдера. डोमेन नाम को आवश्यकता वेब प्रयोगकर्ता (भिडियो निगरानी, संचार, स्रोत पहुँच, आफ्नै स्थानीय नेटवर्क संग जडान र यसलाई मा उपकरणहरू), यसको आफ्नै स्थिर को अभाव र त्यहाँ लगातार आईपी परिवर्तन छ, के तपाईं कुनै पनि माध्यमबाट इन्टरनेटमा जडान गर्न चाहनुहुन्छ लगभग कुनै पनि विकल्प प्राप्त गर्न सक्छन् प्रदायक।
प्राविधिक सहयोग DDNS
DDNS सूची निरंतर बढ्दै छ। त्यहाँ एक लामो समय को लागि सेवा प्रदान गर्न र निःशुल्क, त्यहाँ हालै देखा गरेको ती हुन् भनेर कम्पनीहरु छन्। चासो तपाईंको आफ्नै डोमेन नाम प्राप्त लागि निःशुल्क र सशुल्क विकल्प, र कम्पनी को विकल्प र - स्वाद र उपभोक्ता को प्राथमिकताहरू एक कुरा।
लगभग सबै routers तपाईं DynDNS ठेगाना निर्दिष्ट र आवश्यक समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। प्रत्येक मामलामा फरक हुन सक्छ, तर कुनै पनि मामला मा जडान DDNS सेवा बिन्दु र स्थानीय नेटवर्क (Camcorder, सर्भर कम्प्युटर, अन्य उपकरण) को राउटर जोडिएको प्रदान, इन्टरनेटमा स्थिर नोड फिक्सिंग गरेको छ।
प्राविधिक, सारा प्रक्रिया रूटर र लैन मा कम्प्युटर कन्फिगर, सेवा प्रदान गर्दछ जो कम्पनीको वेबसाइट, जाँच गर्न छ।
फलस्वरूप, प्रयोगकर्ता सामान्यतया तेस्रो स्तर मा, आफ्नै अद्वितीय डोमेन नाम हुन्छ। यो एउटा नाम र पासवर्ड तोकिएको छ, यो तपाईंको ई-मेल ठेगाना प्रदान गर्दछ। अर्को, रूटर, कन्फिगर गरिएको छ यो डाटा प्राप्त निर्दिष्ट र लैन मा उपकरणहरू सँग कुराकानी गर्न सेट।
इन्टरनेटमा ठाउँ मा तपाईं एक स्थानीय क्षेत्र सञ्जाल एउटा यन्त्र उल्लेख गर्न सक्छन् केहि सरल कदम (घर, कार्यालय), को दर्ता डोमेन नाम प्रदर्शन जहाँबाट पछि।
DDNS सेवा प्रदान कम्पनीहरु
DDNS सूची को भूगोल, पर्याप्त ठूलो छ डोमेन क्षेत्र र उत्पादन सर्भर को स्थान एक सचेत विकल्प र गुणस्तर सेवा गर्न अनुमति दिन्छ। डोमेन क्षेत्र com मा चिरपरिचित कम्पनीहरु:
डोमेन क्षेत्र RU काम मा:
सामान्यतया सेवा तेस्रो-स्तर डोमेन को रूप मा प्रदान गरिएको छ, प्रत्येक कम्पनीको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा स्थित विभिन्न डोमेन क्षेत्र, भुक्तानी वा निःशुल्क अवस्था मा DDNS-सर्भर को आफ्नो सूची छ।
सेवा को सक्रियता अप गर्न तीन दिन, सल्लाह र सहयोग घडी वरिपरि रहन्छ। हाल को वर्ष मा एक साधारण अभ्यास थप सुरक्षित बन्ने र विदेशी सर्भर मार्फत आफ्नो यातायात पारित गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने प्रयोगकर्ता को चासो पूरा गर्न सुरु गरेको छ।
आफ्नै निजी नेटवर्क वा बाह्य DDNS?
मुद्दा महत्वपूर्ण हुँदा, प्रयोगकर्ता एक विशेष आवेदन आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापना गर्न प्रेरित छ - त्यसैले यसलाई पहुँचयोग्य आफ्नै निजी नेटवर्क बन्नेछ। यस्तो मा नेटवर्क कुनै पनि सेवा वा कार्यक्रम गर्न कुनै पनि प्रोटोकल (पोर्ट) को प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सकिन्छ।
हरेक DDNS-सेवा यस्तो सेवा प्रदान गर्दछ। सामान्य अभ्यास डोमेन नाम संग ग्राहक प्रदान गर्न र एक विशेष सेवा काम गर्न पूर्व-कन्फिगर गरिएको छ जो ग्राहक राउटर, प्रसारण प्याकेटहरू पहुँच हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न छ। यो राउटर नियन्त्रण सञ्जाल, मा, इच्छित उपकरण कन्फिगर गर्नुहोस्।
आधुनिक routers यसको आफ्नै DDNS सेवाहरू र DDNS सूची दुवै हुन सक्छन्। उत्तरार्द्ध विकल्प ठीक यो DDNS जडान सर्तहरू यसको संभावित स्पष्ट गर्न उचित छ राउटर को अधिग्रहण लागि ग्राहक छान्नुभएको छ कि सेवा, समावेश हुन सक्छ।
निःशुल्क DDNS सर्भर को सूची एकदम व्यापक छ र मांग प्रयोगकर्ता पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। सेवा गुणस्तर निर्णय गर्नुअघि, तपाईं ध्यान दिएर सबै वजन गर्नुपर्छ तथापि, लगातार सुधार भएको छ।
जानकारी, ट्राफिक वा आफ्नो सुरक्षा को मूल्य एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्यारामिटर सेवाहरू हुँदा यो मामला छ। भुक्तानी सेवा गतिशील आईपी पनि राम्रो छ, र - आफ्नै स्थिर आईपी-ठेगाना अक्सर थप होनहार र सस्ता संभावना समस्या छ।
दोहोरो DDNS सेवा र डाटा सुरक्षा
एक मुक्त DDNS विकल्प प्रयोग निर्णय गर्दा, तर त्यहाँ अरू कसैको सर्भर मार्फत आफ्नै घर को सीसीटीवी क्यामेरा जानकारी प्रवाह पारित गर्न यातायात सुरक्षा वा एक विश्वस्त इच्छा हो, जानकारी भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ फरक दिशामा बग्छ, वा सेवाहरूको विभिन्न माध्यम।
त्यहाँ धेरै समाधान गर्दै छन्। तपाईं विशेष मा, फाइदा लिन सक्छ, उद्देश्य जो मर्मतसम्भार र सुरक्षा छ सेवा cloudflare com, तपाईं सुरक्षा र ट्राफिक जानकारी मुद्दा सधैं ग्राहकहरु को चासो ख्याल गर्ने एक निजी प्रदायक संग छलफल गर्न सक्छन्।
तर आर्थिक अनुमति छैन भने, तपाईंले सिद्ध सेवाहरू प्रयोग गरेर आफ्नै रणनीति विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरक्षा - यो स्पष्ट अमान्य गर्ने क्षमता छ। धेरै मूल्यवान कुरा हेर्न, तर दृश्यात्मकता पहुँच काल्पनिक थियो भनेर पक्का गर्न सबै लागि सुविधाजनक स्टोर। उच्च गति इन्टरनेट पहुँच, गृह नेटवर्क मा DDNS, प्रयोग न्यूनतम वित्तीय लगानी संग सुरक्षित सिस्टम सिर्जना गर्नेछ जानकारी को जानकारी प्रवाह र सामग्रीको होसियार विश्लेषण।
मेल र DDNS सेवा
को DDNS गर्न उत्कृष्ट साथै - मेल प्रदान गर्दछ pdd Yandex RU। यो सेवा Yandex को क्षमता को क्षेत्र मा तपाईंको आफ्नै डोमेन जडान गर्न मेलबक्सहरू र डिस्क स्पेस एक ठूलो मात्रा ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ।
सेवा को एक रोचक सुविधा - प्रयोगकर्ता डोमेन जडान गर्न, जो संगठन मेल सेवा, API र एसएमएस-सूचना अक्षरहरू बारेमा पहुँच। यी क्षमताहरु Yandex RU pdd। हुनत यो विकल्प काम योजना आफ्नै विचार को कार्यक्रम मा, सबै भन्दा संभावना छ, र विकास गर्न समय आवश्यक थियो, अनुकूलन र DDNS इष्टतम संग काम निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
अझै पनि स्पष्ट गर्न कुनै पनि अतिरिक्त लागत बिना अवस्थित क्षमता प्रयोग छ आदर्श आउटसाइडर्स गर्न सजिलै देखिने थिएन, तर कार्यहरू लागि उपलब्ध छ।
प्रत्येक मामला मा, यस्तो समाधान अद्वितीय छ, तर यो objectively प्रदान DDNS-सेवा विद्यमान उपलब्ध परिस्थिति र स्रोतहरू विश्लेषण गर्न समय लाग्छ। यो खातामा routers र लिंक प्रयोग आफ्नै उपकरण को प्राविधिक विशेषताहरु, लिन महत्त्वपूर्ण छ।
DDNS र राउटर
एक फरक विचार मार्फत एक विचार प्रयोग गरेर - कहिलेकाहीं सुरक्षा र लागत अनुपात मा राम्रो परिणाम प्रविधिको चौराहे मा हासिल गर्न सकिन्छ।
द्वारा र ठूलो routers र ग्राहकको अर्डर गर्न पेश गर्नुपर्छ भनेर वस्तुहरूको DDNS सूची - यो समस्या को एक भाग हो। कम्पनी को ग्राहक रोजेका बस सूचीमा हुन सक्दैन, तर यो राउटर निर्माता देखि विकल्प DynDNS सेवा लगाएको गरिनेछ।
पहुँच अधिकार र नेटवर्क स्रोतहरू सम्भावित टकराव। ठीक छ, ग्राहक डोमेन नाम तोकिएको हुँदा - त्यो घर मा Camcorder आफ्नो अपील माध्यम गर्न सक्नुहुन्छ। के यदि दस यस्तो क्यामेरा, र बच्चा आफ्नै कम्प्युटर, पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक जो छ? Functionally राउटर - केवल सीमित उत्पादन, र हरेक मोडेल बंदरगाहों को पर्याप्त संख्या, होइन उल्लेख भएको मौका तिनीहरूलाई उपलब्ध छ।
DDNS र रिमोट विन्डोज / लिनक्स पहुँच
एक सभ्य विकल्प - हामी यो आदर्श समाधान छ, तर DDNS-सेवा एक स्थानीय नेटवर्क मा होस्ट कम्प्युटरमा दूर पहुँच (घर, काम) प्रदान गर्दछ भनेर भन्न सक्दैन।
एउटा कम्प्युटर नियन्त्रित रूटर खेल्छ जो नेटवर्क। सबै नेटवर्क उपकरणहरू उपलब्ध (अन्य मिसिन, प्रिन्टरहरू, फ्याक्स मिसिन, भिडियो रेकर्डर, को सेन्सर र यसको अगाडी।)।
होस्ट कम्प्युटरमा रिमोट पहुँच बढाउनका लागि, तपाईं सम्पूर्ण नेटवर्क नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। को SSH-प्रोटोकल मार्फत - Windows मा, विचार एक लिनक्स वातावरण रिमोट पहुँच, मार्फत बुझे गर्न सकिन्छ।
आधारभूत सम्पत्ति जानकारी
गतिशील आईपी कसरी बनाउने र यसले के गर्छ?
सामाजिक सञ्जाल मा समूहको लागि एउटा नाम कसरी चयन गर्ने?
इन्फ्रारेड हीटर "Almak": ग्राहक समीक्षा
हामी कसरी आफ्नै हातले पुरुषहरु कंगन बनाउन सक्छ?
विद्यार्थी उपलब्धि को मापदण्ड आधारित मूल्यांकन
पुरातन मिश्री मन्दिर: विवरण, इतिहास र फोटो
को अन्डा प्रोटीन विभिन्न व्यञ्जन तयार लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ रूपमा
महानगरीय - यो महानगरीय ... रूसी चर्च
के एक सपना राम्रो छ या पतली छ?